Mpaghara: Mobile App Analytics na Ahịa Ahịa | Martech Zone
Obodo na-enye ezigbo oge mobile ngwa nchịkọta ọrụ maka iPhone, iPad, Android, Blackberry, Windows Phone 7 na HTML5 ngwa. Ihe ngwọta ha nke igwe ojii na-enye usoro ikpo okwu mechiri emechi nke na-enyere ndị ahịa aka kewaa ndị ọrụ dabere na ọrụ ngwa ngwa n'ezie ma nyefee mgbasa ozi ahịa ezubere iche na amụma.
Mpaghara Mobile App Analytics gụnyere:
Dashboards hapụ ndị ahịa ka ha nyochaa omume onye ọrụ dị mkpa, ka ha na-eme
Njikwa anụ olu na-enye ndị ahịa ohere iji data mee ka atụmanya gbanwee
Nkewa onye ọrụ na-enyere ndị ahịa aka ịkesa ma merie ndị ọrụ gị site na amụma amụma na omume na-eduzi omume
Nyocha njikọ - soro onye ọrụ ngalaba site na ụbọchị mbụ nke ngwa eji eme ihe iji hụ ọhụụ zuru oke maka iji oge.
Ndụ uru nsuso - nyochaa nke ndị ahịa na-azụ ahịa nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ndụ na itinye ego na nghọta ahụ iji nwekwuo ọfụma-na-akụ ahịa ngwa ahịa ekwentị gị.
Na-akwado isi nyiwe niile - iOS, Android, Windows 8, Windows Phone, Blackberry na HTML 5.
Mmekọrịta - onye na-ewu ajụjụ na mbupụ API na-enye gị ohere iwekota data gị na sistemụ ụlọ ọrụ gị dị ugbu a.
Nche data- jiri Amazon Web Services tinye n'ọrụ iji debe data gị niile 24/7.
Mpaghara Mobile Mobile Marketing na-enyekwa ọtụtụ njirimara bara ụba, na-enyere gị aka ịchọpụta, nyochaa ma mee ihe na ngwa ngwa na ezigbo oge iji nyere gị aka ịnweta mmekọrịta, iguzosi ike n'ihe ka mma mmekọrịta gị na ndị ọrụ njedebe gị, ịkwọ ụgbọala, ntinye aka na ntinye ego na iguzosi ike n'ihe. Uzo ha na-enye njikwa nnweta, njikwa mkpọsa, akparamaagwa & ọnọdụ ezubere iche, ozi In-App ahaziri iche na ule A / B.
Tags: nchịkọta ngwaahịa ngwamobile nyochamobile ngwa nyochamobile ngwa ahịa